ABO-Shanee – Ayyaantuu Online
Afandii Muttaqii tiin | Bitootessa 24, 2021
Namootni yeroo jalqabaatiif maqaa akkana je’uun dhaaba angafa qabsoo Oromoo keessatti shoora guddaa taphachaa bahe waamuu jalaqaban namuma haga tokko turan. Namootni kun kaayoon isaan qabatanii ka’an Jaal Daawud Ibsaa hoggansa ABO irraa buusuu qofa ture. Sanaan achitti adeemsa akkanaatiin waan QBO fi ummata Oromoo irratti dhufuu malu itti hinyaadne. Ar’a kunootii jechi isaanii uummatan sun furguggee hoggansa ABO itti arrabsan ta’uu bira dabree ulee alagaan ummata Oromoo fi sabboontota Oromoo haala suukanneessaadhaan ittiin ajeeftuu tahee jira. Yeroo ammaa kanatti Lammiin Oromoo bilisni badii tokko malee “ABO_Shanee” jedhamee bineensa alagaatiin itti duulamee dhaabaa-dhaabbata akka dhabu taasifamaa jira. Ilmoo xixxiqaa hundaatu “ABO_Shanee” jedhamee galaafatamaa jira. Wanti yeroo ammaa Oromoota Walloo irra gehaa jiru kanaaf ragaa guddaadha. Bakka birottis taanaan ati nama Oromoof quuqamu yoo taate “ABO_Shanee” jedhamtee yaamamta. Haga arraa namoota badii gugguddaa ummata irratti hojjatan obsaa turre. Kana booda adeemsi akkanaa dhaabbachuu qaba. Gochi isaanii saxilamee himamuu qaba.
—–1. Jecha ABO-Shanee jedhu kana kan kalaqee hojirra olche garee Kamaal Galchuu ture.
2. Sana booda yeroo Lammaa fi gareen isaa TPLF wajjiin wal-nyaachuu jalqabetti namootni garee Lammaa deeggaran “ABO shaneen diina keenya. Shaneen Wayyaanee wajjiin tahee qabsoo Oromoo xalafuu barbaada” jechuu jalqaban.
3. Eega jijjiiiramni dhufe jedhame booda ammoo hattootni OPDOn bobbaafte kan akka Alamuu Simee, Taayyee Dande’aa, Milkeessa Miidhagaa, Hangaasaa Ibraahim, Dani’el Arerii, Ahmad Gishee, etc ABO maqaa balleessina jedhanii jecha kana asiifi achi hafarsan. Namni keenya kan Wallaggaa, Gujii, Harargee, Baalee, Booranaa, Jimmaa, Salaalee, Jimmaa, Amboo, Jalduu, Horroo Guduruu kkf waggaa sadeen kana keessatti maqaa kanaan baayyee hiraarfame. Amma ammoo Oromoon Walloo “ABO_Shanee jedhamee azaaba adunyaa argaa jira.—–”
Seenaa rirmi hin nyaatu” jedhe gootni keenya Haacaaluu Hundeesaa. Eeyyeen! Seenaan seenaadha. Namootni dhaaba Oromoo angafa maqaa jallisanii maqaa “Shanee” jedhuun yaamuu jalqaban, namootni maqaa kana alagaa biratti “brand” godhanii fi gantootni maqaa kanaan daldalanii saba bal’aa kanatti jiruu busheesan hundi gochaa isaanii waliin galmee seena keessatti akka galmeeffaman beekuu qaban..—–
Amma booda namoota hojii fokkotaa ummata Oromoo irratti dalagan hunda baala irratti cabsanii yakka isaanii awwaaluun hinjiru. Seenan hojii isaanii hunda jala sararee dhaloota dhufuuf dabrsuuf jira.